Guniuswa: Kuminuka Kwakaita Izwi : Sekuru's Stories Guniuswa: Kuminuka Kwakaita Izwi : Sekuru's Stories
Guniuswa: Kuminuka Kwakaita Izwi
Vana vaMurenga ndovakazosvika muGuniuswa. Guniuswa inzvimbo yeuswa, inzvimbo yaive neuswa. Ndofunga uswa hwacho hwanga hwakakora. Kune humwe hwatinoti zhengeni, hwakakora kunge munwe. Saka ikoko ndofunga hwanga hwakakoresesa maningi uswa hwacho, saka vakati Guniuswa.
Guniuswa rinonzi Arusha. Vanhu vanogara muTanzania vanoiti Arusha, inzvimbo inonzi Arusha. Saka inzvimbo inokosha, inoera. Kana vekuTanzania, vanoti iyo nzvimbo iyoiyo, inoera. Kuera kwaye, tingangoti ndiyo nzvimbo yechipiri kugarwa nevanhu vatema muno muAfrica muno umu, vachibva kwavakabva. Vakabva kunzvimbo yekutanga vachiuya muno muGuniuswa.
Murenga hazvimbozivikanwe kuti akafa sei, asi kufa kwaakazoita izwi ndoraitaura. Rakatanga richitaura pauswa vari kuGuniuswa. Ndopazvikatanga, kuti ukasvika pauswa izwi rotanga kutaura.
Vanga vatungamirirwe neizwi, baba vakanga pasisina. Raigona kufembera, “Mangwana kuchauya zvakati.” Vanhu vogara vakaziva kuti kune zvinhu zviri kuuya mangwana. Vaiziva kuti kune izwi rinotitungamirira ipapo.
Saka izwi iroro raigona kutaura pauswa. Misikanzwa inoita kuti vanhu vakapisa uswa, ndobva rataura riri pamuti. Saka nemisikanzwa iwoyo vakabva vatema muti wacho. “Sei muti uyu uchitaura?” Rakataura padombo, vanhu nokushereketa vakapwanya dombo racho. “Sei domba richitaura?”
Saka rakazotaura pamunhu. Rakauya ari mwana mudiki, mukomana, saka vakatadza kuuraya munhu. Ndobva akura, riri izwi, achitaura, achitungamirira vanhu kusvika ava munhu mukuru.
Ndobva vati, “Chinhu chiye chaminuka chakutaura pamunhu.” Saka Chaminuka harisi zita. Kuminuka kwakaita izwi riya riya, rakutaura pamunhu. Ndobva vati, “Chinhu chiye chataura pamuti chiya chiya chaminuka chava kutaura pamunhu. Saka kuuraya munhu wacho hazviite.”